UMphathiswa Wezokhenketho waseSeychelles utyelela amaziko amancinci eLa Digue
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » UMphathiswa Wezokhenketho waseSeychelles utyelela amaziko amancinci eLa Digue
Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Seychelles La Digue
Ukubuyela ezingcanjini zakhe, uMphathiswa Wezangaphandle kunye noKhenketho, uMnu.Sylvestre Radegonde, naye ongumDiguois, wanduluka waya kwisiqithi saseLa Digue, ebiza amaziko amancinci kwimizamo yakhe yokuziqhelanisa namaqabane ezokhenketho lwasekhaya kunye neemveliso zabo.
Abanini beLa Digue bavumile ngamxhelo mnye ukuba isiqithi siza kubuyela ebomini njengoko iindwendwe zibuya kancinci.
UMphathiswa uRadegonde ugxininise ukubaluleka kokugcinwa kweLa Digue kunye nendlela yayo yokuphila.
USosiba oyiNtloko kwezoKhenketho uNkosazana Sherin Francis uvakalise ukuba amanye ala maziko amancinci anemigangatho efanayo neehotele ezinkulu, eziphambili.
Ephelekwa nguNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho uNkosazana Sherin Francis, uMphathiswa uRadegonde waqala uhambo lwakhe eLa Digue ngoLwesine, nge-19 Agasti 2021, eLakaz Safran. Oku kwalandelwa yiLa Digue Self Catering Apartments, Chez Marston, Domaine Les Rochers, Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, Tanette's Villa, Fleur de Lys, Auberge De Nadege, Ylang Ylang, Hyde-Tide Apartments neziphela eLa Digue Villas Holiday Villas.
The Utyelelo lwabaphathiswa Iqhubekile ngosuku olulandelayo luqala e-Kaz Digwa Self Catering elandelwa ngu Pension Fidele, Gregoire Apartments, Pension Hibiscus, Lucy's Guesthouse, Cabane Des Anges, Pension Michel, Le Repaire Boutique Hotel & Restaurant, Chez Marva, La Belle Digue Don ugqibezele nge Belle Amie.
Abanini beLa Digue bavumile ngamxhelo-mnye ukuba isiqithi siza kubuyela ebomini njengoko iindwendwe zibuya kancinci. Abahambi abaninzi basazifumana behendiwe ngamakhubalo esiqithi, ngakumbi ukuzola kwesi siqithi kunye nokubuk 'iindwendwe kwabantu, beziva beziva besekhaya.
Uninzi lwabanini bamaziko babeneenkxalabo ezininzi malunga nokungabikho kwemisebenzi ethembekileyo kunye nokubeka emngciphekweni indlela yokuphila yaseLa Digue. Baye bavakalisa amaxhala abo malunga nenani elonyukayo labakhenkethi bemini. Njengomphumo wezinto ezininzi kubandakanya ukwehla kwamaza okufika kweenqanawa esiqithini ezichaphazele kakhulu izinga lokuhlala kwabo, bambalwa abatyeleli abahlala ubusuku, nto leyo inciphise ingeniso yesiqithi.
Ngobuhle bayo bokwenene be-creole, iLa Digue yenze igama ngokunika abahambi elona thuba lokugqibela lenkcubeko, nangona kunjalo, ukuphuculwa kwezinto kusongele ukutshabalalisa ezinye zezona ndawo zibalaseleyo kwesi siqithi.
UMphathiswa uRadegonde ugxininise ukubaluleka kokulondolozwa kweLa Digue kunye nendlela yayo yokuphila: Kufuneka sinike iindwendwe zethu into yokuhlala, yiyo loo nto kufuneka sisebenzise iimveliso zethu kwaye sivuselele imisebenzi yethu yenkcubeko. Nangona iLa Digue yenye yeendawo ezimbalwa ezishiyekileyo eSeychelles ethe yakwazi ukubambelela kwindlela yokuphila yesiCreole, kufuneka siqinisekise ukuba iyasinda. ”
Uye wongeza wathi: “La maziko amancinci aqwalasele iinkcukacha, anika abatyeleli bethu ubunyani Amava eSeychelles, yiyo loo nto befuna inkxaso yethu enkulu. Kufuneka siphonononge izimvo ezintsha eziza kukhuthaza abatyeleli ukuba bachithe imali kwaye sincede la maziko anyuse iindlela zawo zokuthengisa. ”
U-PS Francis uvakalise ukoneliseka kwakhe ngumgangatho weemveliso eLa Digue, “Ezinye zezi ndawo zincinci zinemigangatho efanayo nezo zikhulu, iihotele eziphambili; ivulekile kakhulu kwaye ihonjiswe kakuhle inika iindwendwe zethu imvakalelo entle ngelixa igcina umtsalane wesiCreole. ”
UMphathiswa uRadegonde uvuyisene nabakwaDiguois ngokuphuculwa kococeko lwesiqithi. Uye waqaphela ukuba kukho ulungelelwaniso olulungileyo lweemveliso ngokubhekisele kwindawo yokuhlala enobukho obomeleleyo benkathalo kunye nomzamo obekwe kwezi mveliso. Nangona kunjalo, uyivumile imiceli mngeni yabo kunye nendlela ekufuneka betshintshe ngayo ukugxila kwiimarike zesiko laseNtshona Yurophu kwaye bathengise kwiimarike, ezinjengeMpuma Yurophu kunye ne-UAE, ezibonise amandla amakhulu ngeli xesha lobhubhane.
Olu tyelelo luyinxalenye yephulo likaMphathiswa uRadegonde lokwakha ubudlelwane obuluqilima kunye nomzi mveliso wezokhenketho nokujongana nemiba ebalulekileyo.